Yakanakisa Latex piro ine butiro Mutengesi | Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvepamusoro Yakanakisa Latex mutsago nevhavha Yekutengesa
Iko kushanda kwechigadzirwa kwave kunatsiridzwa zvakanyanya needu akasimba R
<$>> D timu.
Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, yakavambwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tec & Isu tinonyatsoteedzera yakajairwa mhando yekudzora maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu. Uye zvakare, isu tinopa mushure-yekutengesa masevhisi evatengi pasirese pasirese. Parizvino, Rayson apfuura iyo yepasi rose mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Zvese zvigadzirwa zvinosanganisira yedu nyowani chigadzirwa
inopihwa nehunyanzvi hwekugadzira, hunovimbiswa mhando, uye nemakwikwi mitengo. Mushure memakore ekuvandudza, isu tasimbisa kwenguva refu kudyidzana hukama nevatengi vedu pasirese. Ndokumbirawo uve nechokwadi chekuti tine kodzero yekutengesa zvigadzirwa zvedu uye hapazove nekukuvara kwakaitika kune izvo zvakaunzwa zvinhu. Isu tinogamuchira nemoyo wese kubvunza kwako uye kufona.
Ndingaite sei kuti ndiwane mimwe mienzaniso, Mushure mekusimbisa chipo chedu uye titumirei iwo mutengo wekuenzanisira, isu tinopedzisa sampuro mukati me15 ~ 20 mazuva. Iwe unogona kukumbira iyo yakajeka kambani kuti itore iyo sampuro kubva kukambani yedu kana iwe unogona kuti titumire DHL, FedEx kana UPS kuunganidza nhamba account, tinogona kutumira iyo sampuli kwauri neakaunzi yako. logo pane chigadzirwa? Tinogona kuita metiresi zvinoenderana neyako dhizaini kana kupa OEM sevhisi inongoda iwe kuti utipe chigadzirwa chako mifananidzo kana logo mapikicha. 1.Isa makatoni munzvimbo yakati sandara muimba yako yekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Chenjerera kucheka bhegi rekunze nekero uone kuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga.
3. Bvisa kunze kwemetiresi-yakavharwa pametiresi pamubhedha wako 4Chenjerera cheka bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo machira achangotanga kuparara, Bvisa bhegi repurasitiki. 5. Bvumira maawa makumi maviri nemana kuti mateti yako nyowani iwedzere zvizere.